Gamithromycin Certification - China NCPCVET
fanafody nentim-paharazana sinoa
Resadresaka & QC
Vao haingana, NCPCVET nahazo taratasy fanamarinana ny fanafody vaovao ho an'ny firenena kilasy faharoa-fitsaboina momba ny biby vaovao drugs- "Gamithromycin" sy "Gamithromycin tsindrona."
Gamithromycin dia tantara semi-synthetic macrolide antibiotika. Amin'izao fotoana izao, tylosin sy ny tilmicosin no be mpampiasa toy ny macrolides. Ireo zava-mahadomelina dia ampiasaina mba hisorohana na hitsaboana aretina taovam-pisefoana, dia omby aman'ondry sy ny kisoa. Izy ireo matetika miaraka amin'ny zava-manitra sakafo na rano fisotro. Ny vokatry ny fisorohana na dia mila fitsaboana maro andro miverimberina fitantanan-draharaha. Na dia efa nahavita vokatra tsara, fa amin'ny fanitarana ny fampiasana ny fotoana, dia efa nisy ambaratonga samihafa ny zava-mahadomelina fanoherana tany amin'ny toerana maro, miaraka amin'ny fitomboan'ny ny habetsaky ny fitsaboana dia mihena tsikelikely.
Ny fampidirana ny gamithromycin lasa ny NCPCVET dia fiomanana atao amin'ny fampifangaroana, prefiltering, tsy mamokatra filtration, ary aseptic mameno. Manana tombony ireto: Voalohany, iray fatra ny subcutaneous / hozatra tsindrona Intramuscular tsindrona, tsindrona mpitovo afaka mamaha ny olana. Ny faharoa dia tsy ampiasaina mba hisorohana ny aretina taovam-pisefoana omby, fa koa ny tena vokatry ny aretina taovam-pisefoana amin'ny kisoa. Ny fahatelo dia maharitra mahery vokany, tsy misy vokany, fahombiazan'ny dia mahery noho tylosin, tilmicosin sy ny zava-mahadomelina macrolide be mpampiasa. Ny fahefatra dia ny tombony amin'ny malalaka antibacterial karazany, matanjaka antibacterial asa, hisakana ny fiasan'ireny haingana, avo bioavailability, ambany sisa, ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny avo.
Ny fahombiazana fampiharana izany vokatra dia hanampy manatsara ny rafitra orinasa ao Shina fitsaboina momba ny biby zava-mahadomelina vokatra, mbola hihaona ny tsena tinady, ka mampitombo ny tsena fifaninanana ny iraka fitsaboina momba ny biby zava-mahadomelina.
Post fotoana: Jun-26-2018
Io môdely dia bitika akany ho an'ny sokajy fandraharahana, izany hoe Petro - Industrial HTML Template. nisy efa tafahoatra io dia mampiasa fanononana HTML / CSS.
Adiresy: No.19 Huaqing North Street, Shijiazhuang, Hebei Province, Sina
Copyright © 2017 GOODAO.CN Zo rehetra voatokana.